Ny Foiben’ny MySpace.com ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 4:52 GMT
Lahatsoratra tsotra tao amin'ny bilaogy nosoratan'i Marco Islas Cruz avy any Veracruz, Mexico, no niantombohany, nitondra lohateny hoe “Ireo Biraon'ny MySpace.com ao Meksika“.
Naneho hevitra ilay bilaogera Blinh Bling “P Cero” , “TPT, fantatro ankehitriny ny antony maha-mirary be ireo bilaogy MySpace.”
Ny sarin'ny trano fidirana aterineto iray navadika ho takelaka MySpace ao Huauchinango, Puebla avy eo no notsaingohan'i [Es] Enchilame, ilay fampivondronana toy ny Digg noforonin'ilay Espaniola mpamorona no sady mpisolovava ireo rindrambaiko maimaimpoana, Ricardo Galli [Es]. “Darkbop” mpampiasa Enchilame no nanampy hoe [Es], “haha, nilaza tamiko ny namako iray hoe ‘fironana’ izao ny anarana fandraharahàna faranana amin'ny hoe “.com”.
Alejandro Ojeda avy amin'ilay bilaogy malaza amin'ny resaka teknika, Blogueando, avy eo no niantsampy tamin'ilay resaka [Es]: